वान डे सिरिजः भारतले टस जित्यो, हेर्नुस् तेस्रो खेलमा को–कोले पाए मौका? - Everest Dainik - News from Nepal
वान डे सिरिजः भारतले टस जित्यो, हेर्नुस् तेस्रो खेलमा को–कोले पाए मौका?
काठमाडौं, फागुन २४ । अष्ट्रेलिया विरुद्धको एकदिवसीय सिरिजको तेस्रो खेलमा भारतले टस जितेर बलिङ रोजेको छ । खेल भारतको राँचीमा भइरहेको हो । यसअघि, लगातार दुई खेलमा विजयी भएकाले आजको खेलमा पनि जित निकाल्दै भारत २ खेल अगावै सिरिज आफ्नो पक्षमा पार्न चाहन्छ । यस्तै, अष्ट्रेलिया पहिलो जित निकाल्दै सिरिज जित्ने सम्भावना कायर्म राख्ने योजनामा छ । आजको खेलमा को–कोले पाए मौका? हेर्नुस्—
याे पनि पढ्नुस अष्ट्रेलियाको उत्कृष्ट शुरुवात, १९३ रनमा पहिलो गुम्यो विकेट